Global Computer မှကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by kyaw min thein at 7:17 PM No comments:
GLOBAL COMPUTER သင်တန်းမှကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by kyaw min thein at 7:07 PM No comments:
လုံးဝ အခြေကျသော Very Basicting Foundation Course ဖြစ်သည်။ ၄င်းသင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် ကွန်ပျူတာ တစ်ခုလုံး၏ အလုပ်လုပ်ပုံများကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တဲ့အတွက် A+ သင်တန်းကို ဆက်လက်လေ့လာလျှင် နောက်ထပ် 1 လ အချိန်ပေးလျှင် သင်ကိုယ်တိုင် ကွန်ပျူတာ ပြင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာ Technican တစ်ယောက်ဖြစ်လာမည့် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ Course Outline Detail မဖော်ပြချင်တော့ပါ .. သင်တန်းကြေးမှာ မြန်မာငွေ ကျပ် (60000) ထိုင်းဘတ်ငွေ 2000 ဘတ်ဖြစ်သည်။
Posted by Zayyar Ting at 5:38 AM No comments:
Beyond these parts are the hardware items that are located inside the computer case and the peripherals, which are optional pieces of hardware that make the computer system more useful, or enable you to accomplish additional tasks. Let's takealook at the basic hardware components, or the things required in order to let you and the computer interact.
စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးဟာ ကွန်ပျူတာ၏ စက်ပစ္စည်းပိုင်း တနည်း ရုပ်ဝတ္တူပိုင်းပါ၊ ကွန်ပျူတာ ပုံးခွံ (Computer Case)? ကွန်ပျူတာ အပေါ်စက် (Monitor) ကွန်ပျူတာ လက်နှိပ်ခုံ၊ (Keyboard) ၊ မောက်စ် (Mouse) နှင့် မီးအားပေး ကိရိယာ (Power Cord) ဒါတွေအားလုံးဟာ ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီအချက်အလက်များကို သင့်အသုံးပြုနေသော စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားတွင် တခါထဲ တွေ့မြင့်နိုင်ပါတယ်၊
ဒီပစ္စည်းများအပြင် ကွန်ပျူတာ သေတ္တာ အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်၊ တနည်း ကွန်ပျူတာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ၄င်းပစ္စည်းများဟာ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်ဖို့အတွက် အရမ်းအရေးပါ ပါတယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းဆီးအလိုက် သူနေရာသူ လုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ စက်ပစ္စည်းပိုင်းများကို လေ့လာကြည့်ရအောင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာနဲ့ လူနဲ့ကြားဘယ်လိုဆပ်စပ်မှုတွေ အမိန့်လိုက်နာမှုတွေ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါသလဲ ....?
Posted by kyaw min thein at 10:29 PM No comments:
Think about the activities you perform or want to perform usingacomputer (email, online shopping, etc.).
Think about all the computers that are necessary for you to complete your normal activities.
Is itacomputer that controls the stoplights so you can drive to work?
Does the coffee store you visit useacomputer to order their inventory?
သင်လေ့လာခဲ့သော ကွန်ပျူတာအခြေခံ သင်ခန်းစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး (အီးမေးလ်၊ အင်တာနက်မှ ဈေးဝယ်/ရောင်းခြင်း)
ကွန်ပျူတာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ရဲ့ ပုံမှန်လေ့လာမှုက ပြီးဆုံးပါပြီ၊ လိုအပ်နေသေးရင် ဆက်ပြီးလေ့လာပါ၊
ကွန်ပျူတာကို အသုံးချပြီး လမ်း မီးပွီုင့်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သလား?
ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များတွင် ပစ္စည်းများ၏ဈေးနှုန်းများ ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် စီစစ် ပြီး ငွေကြေးစာရင်ကို တစ်ခါတည်း တွက်ချက်နိုင်သလား ?
ကုန်ကျန်စာရင်းများကို တွက်ချက်နိုင်သလား ?
စတိုးဆိုင်အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဘယ်လိုစီမံတွက်ချက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်သလား?
Posted by kyaw min thein at 10:25 PM No comments:
Posted by kyaw min thein at 10:20 PM No comments:
There are many types of computers, but personal computers such as desktop and laptop computers are probably the two type of computers that you think of first.
မတူညီတဲ့ ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားများ ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိသလဲ ?
ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားတွေကတော့ အများကြီးပါဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ Personal Computer (PC) လူတစ်ဦးတည်းသုံးကွန်ပျူတာမှာတော့ (Desktop) စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာနဲ့ (Laptop) မှတ်စုစာအုပ်အရွယ်၊ ဘယ်နေရာမဆို ယူသွားလို့လွယ်တဲ့ ကွန်ပျူတာ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိတယ်ဆိုတာကို ပထမဆုံး မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
Many people use desktop computers, or desktops as they are often referred to, at work, home, school, or the library. They can be small, medium, or large in style, and usually sit onadesk. The term desktop actually refers to the casing, or the tower. Once you addamonitor, mouse, andakeyboard, you have what is typically known asadesktop computer.
လူတော်တော်များများက Desktop Computer (စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ)အမျိုးအစားကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ကို ရုံးလုပ်ငန်းတွေ၊ အိမ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ သက္ကသိုလ်၊ စာကြည့်တိုက်တွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ သူတို့တွေရဲ့ အရွယ်အစားတွေကတော့ ဆိုက်စုံပါဘဲ ကြီး၊ လတ်၊ သေး ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ မိမိအလုပ်စားပွဲမှာ နေရာချထား အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ Desktop ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားကို သူတို့ရဲ့ System Box အနေအထားအရ အလှဲအနေအထားကို Desktop ၊ အထောင်အနေအထားကို Tower ဆိုပြီး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ Desktop ကွန်ပျူတာအမျိုးအစား တွင် ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုရမယ့် Monitor Mouse နှင့် Keyboard များကို အပြင်တွင်သီးခြားပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို System box တွင် တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ယေဘုယအားဖြင့် Desktop computer တာလို့ လူသိများသလဲဆိုရင် ....
Most desktop computers are easy to upgrade and expand, or add new parts. In addition to expandability, another benefit of desktop computers is the cost. If you compareadesktop computer with 128 MB of RAM anda2 GB hard drive toalaptop with the same features, you will most likely find that the desktop computer is priced lower.
Desktop ကွန်ပျူတာ ၏ တည်ဆောက်ပုံအရ ဆပ်စပ်ပစ္စည်းများဟာ သီးခြားရှိနေသောကြောင့် ပျက်သွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို လှဲလယ်ခြင်း၊ အသစ်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြုလုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်၊ အခြားကောင်းကျိုးအနေဖြင့် Desktop computer အပိုပစ္စည်းများဟာ ဈေးသက်သက်သာသာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် ...။ အကယ်ရဲ့ 128 MB ၊ HD 2GB အဆင့်ရှိတဲ့ Desktop ကွန်ပျူတာနဲ့ Laptop မှာ ထည့်သွင်းတဲ့ 128 MB ၊ HD 2GB ပစ္စည်းချင်းတူနေမယ်ဆိုရင် .. အလုပ်လုပ်ပုံချင်းတူနေပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ Laptop ကတော့ ဈေးပိုကြီးပါလိမ့်မယ် ။
The term desktop computer originated when the computer case was wide and flat, and was designed specifically to fit on your desktop with the monitor on top.
တည်ဆောက်ပုံစနစ်အရ Desktop ကွန်ပျူတာဟာ Casing (ပုံခွံ) တည်ဆောက်ပုံအရ၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းတည်ဆောက်ထားလို့ စားပွဲပေါ်မှာထားပြီး အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်တာ မို့လို့ Desktop Computer လို့ ခေါ်တွင်တာပါ။
The second type of computer that you may be familiar with isalaptop computer, or laptops as they are often referred to. Laptops are battery or AC-powered personal computers that can be easily carried and used inavariety of locations.
ဒုတိယကွန်ပျူတာအမျိုးအစားကတော့ အများလည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာသိထားပြီးဖြစ်တဲ့ Laptop Computer အမျိုးအစားဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Laptops အမျိုအစားများကတော့သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး နေရာမရွေးယူ
သွားနိုင်ပါတယ် Laptop ကွန်ပျူတာများဟာ မီးအားဖြင့်တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်သလို ၊ဘထ္ထရီ ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
A quick glance at the size ofalaptop and you might guess that it would be difficult to expand or upgrade. While the desktop computer case is relatively easy to open and access internal components, the small laptop case makes this more difficult in comparison; however, the primary benefit ofalaptop computer is its small size and easy portability.A laptop computer is sometimes calledanotebook computer because of its size.
အားနည်းချက်ကတော့ ပစ္စည်းအစားထိုးခြင်း၊ တိုးမြှင့်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲပါတယ်၊ Laptop ကွန်ပျူတာများဟာ အစားထိုးပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်း မြင့်မားပါတယ် ၊ အားသာချက်ကတော့ အင်တာနက်စနစ်ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရန် Wireless ကြိုးမဲ့စနစ် ပါရှိပါတယ်၊ အရွယ်အစားဟာ သေးငယ်တဲ့အတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါတယ်၊ Laptop ကွန်ပျူတာများကို Notebook ကွန်ပျူတာလို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Posted by kyaw min thein at 10:16 PM No comments: